बैंक कंगाल, मन्त्री र गभर्नर जिम्मेवार
काठमाडौं । अर्थमन्त्री युवराज खतिवडा र गभर्नर चिरञ्जीवी नेपालको मनमुटाव र बोलचालसमेत बन्दले गर्दा अर्थजगत प्रभावित हुनपुगेको छ । यसमाथि अर्थमन्त्रीले शेयर कारोवारलाई अनुत्पादक भनेपछि शेयरबजार अस्तव्यस्त हुनथालेको छ ।
अर्थविदहरु भन्छन्– ओली सरकार आउनासाथ पैसा बैंकिङ प्रणालीबाट हराउन थालेको छ, प्रणाली बाहिरै डम्प हुनथालेको देखिन्छ । ४ खर्ब ५७ अर्व चलनचल्तीमा हुनुपर्ने हो, ती कता होल्ड भए ? राष्ट्र बैंकले थप १८ अर्व नयाँ नोट बैंकहरुलाई पठाएको छ, त्यो पनि धमाधम होल्ड भएर वैंकहरु एक लाखको कर्जासमेत दिन आनाकानी गर्न थालिसकेको अवस्था सिर्जना भएको छ ।
डेपुटी गभर्नर चिन्तामणि शिवाकोटी स्वयम् अनेक आशंका जन्माएको भन्छन् । नोट कता गयो, कसले होल्ड गर्‍यो ? राष्ट्र बैंकलाई थाहा छैन, उनको जवाफ छ ।
नोट व्यवसायीले होल्ड गरेका हुन् कि भनी अध्ययन भइरहेको उनको तर्क छ तर गभर्नर मौन छन् र राजीनामा दिने कि नदिने भनेर सोचिरहेका छन् । उनले काममा ध्यान दिएका छैनन्, जसले गर्दा राष्ट्र बैंकको भन्दा पनि देशको अर्थतन्त्रमा ठूलै संकट आउने खतरा देखिन थालेको छ । ट्रेजरी बिल, नागरिक बचतपत्र बेचेर धमाधम बजारमा ठूला दरका नोट पठाए पनि बजारमा अर्थको कमीको कारण पत्ता नलाग्नुले राष्ट्रको आर्थिक अवस्था दुर्घटना उन्मुख देखिन्छ ।